6 Torohevitra savvy hanomanana drafitra iray amin'ny teti-bola | Save A Train
Home > Travel Europe > 6 Torohevitra savvy hanomanana drafitra iray amin'ny teti-bola
Ekena fa ny fitsangatsanganana dia zavatra iray novidinao mba hanananao na manankarena! Ary tsy voatery ilaina foana ny hisarahananao amin'ny vola tadiavinao mba hankafizanao ireo harena. Raha mikasa ny hiroborobo amin'ny nosy tropika nanoroka-masoandro izy ireo, na moron-dranomasina misy rakotra ranomandry, fa raha tsy izany, ny efitra maitso malefaka, manao fanapahan-kevitra maro hatrany ianao. Ataovy izay hahatanteraka ny nofinao amin'ny tsy fanaovana ilay sarotra be loatra. Mipetraha miaraka amin'ny vondrona misy anao ary mikasa amin'ny teti-bolanao. Ataovy mahafinaritra ny dia iray manontolo. Ny fitsangatsanganana tarika dia fomba iray tena tsara hananana namana tsara. Fa tsy ny rehetra mandeha milentika, raha tsy natao amin'ny lavorary. Mety tsy marim-pototra izany raha tsy hitandrina ny vola lany, nefa be loatra ny misaron-tava miafina ao. Halaviro ny toetra ratsy rehetra mifandraika amin'ny fitsangatsanganana vondrona ary mikasa ny lojika. Vakio eto ambany ireo toro-hevitra enina maimaimpoana enina izay mahavanon-tsaina handrafitra ny fitsangatsanganana vondrona mahasoa amin'ny teti-bola.
1. Manapaha hevitra amin'ny teti-bola fitsangatsanganana
Eny! Marina ny anao! Tokony hanapa-kevitra ianao aloha ny toerana halehanao, mba hahafantaranao ny vola rehetra. Fa manelingelina indraindray, satria samy mifandray. Ary resaka manahirana ihany koa izany. Na dia mikasa ny dianao manaraka aza miaraka amin'ny namana maromaro ianao, tsy ny rehetra no afaka mividy mitovy. Noho izany, mifanena amin'ny teti-bola voafetra, nanapa-kevitra feno. Ho lasa malefaka ny drafitra rehetra, satria ny ankamaroan'ny vondrona dia tsy voatery hahatsapa ho terena handany vola be. koa, mora kokoa ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fisafidianana toerana, indrindra fa miaraka amin'ny teti-bola raikitra ao an-tsaina. Koa, ianao, miaraka amin'ny mpikambana ao amin'ny vondrona hafa, afaka miantso ny fandaniana fanampiny toa ny sidina, Rentals, sakafo, fivoahana, ary ny maro hafa. Fiaraha-miasa feno no takiana, raha mikasa hanao fitsangantsanganana andiany, hitazona ny fiarahana.
Luxembourg to Brussels Train tapakila
Tapakila fiaran-dalamby ao Antwerp mankany Brussels
Tapakila fiaran-dalamby any Brussels ao Amsterdam
2. Mampisara-bidy ny sandam-pananana feno
Manandrama fantaro ny fomba fizarazarana ny fandaniana. Manapa-kevitra momba ny fomba sy ny fitsinjarana ny sandan'ny mpikambana ao amin'ny vondrona. Ohatra, ianao ve no tompon'andraikitra amin'ny famandrihana efitrano fandraisam-bahiny manontolo, sa tokony hizara an'io amin'ny antsasany ianao? na, ianao mahaliana ny fandraisana andraikitra toy ny fanakaramana taxi sy ny fitsangantsanganana isan'andro? Amin'ny fitsangatsanganana vondrona, Ankasitrahana amin'ny ankapobeny ny fahazoana andraikitra manokana. Mampihena ny fahasarotana ary manafoana ny fandaniana rehetra mifandraika amin'ny dia.
Raha efa nikasa ny dia nitaky teti-bola lavitra tetsy aloha ianao, manandrama mametraka kaonty manokana. Mila manao toy izany koa ianao mialoha. Ireo rehetra voakasik'ilay dia dia afaka mametraka vola manokana, isam-bolana, hitahiry ireo fahasahiranana amin'ny minitra farany. Asa mahatsikaiky kokoa ny fihazonana hotely tsara, rivotra-sidina, sy fandrahoan-tsakafo mahafinaritra.
Tapakila fiaran-dalamby any Munich mankany Zurich
Tapakila fiaran-dalamby any Zurich
Tapakila Basel to Zurich Train
3. Minoa amin'ny sidina ara-toekarena ary toerana itobiana be am-pilalaovana anefa
Mandritra ny fitsangatsanganana an-dalam-drafitra ho an'ny dia andiany iray, mahomby kely amin'ny volanao. Mifantoha amin'ny mpitatitra entana. Betsaka ny sidina fiaramanidina lafo vidy, mampiantrano fonosana vitsy an'isa. Manaova drafitra ny hetsikao aorian'ny fifanakalozan-kevitra momba ireo endrika miafina amin'ireo olon-kafa ao amin'ny vondrona misy anao. Ohatra, azonao atao ny manamboatra ny dianao mankany Roma, Athens, ary Istanbul via Malta. Raha tsy izany, manomboka ny dia avy amin'ny tarika misy anao Berlin a Prague, I Budapest sy Riga dia manana safidy tsara! Ary ahoana ny amin'ny dia an-dàlana na miaina toby maharitra herinandro any an'ala miaraka amin'ireo vadinao? Matetika, dia toy ny misakana ny andro. Tsy mandray andraikitra na avy be ny oram-be, masoandro mirehitra, na kapoka mahery, mandeha anaty fiara ampiana a trano fonosana tafo, dia fitahiana! Izy io dia mila fandrakofana feno sy famirapiratra amin'ilay kitapo namboarina nandritra ny fanaovana manontolo Travel traikefa tony iray.
Tapakilan'ny lamasinina Amsterdam To London
Tiket ny tapakilan'ny lamasinina ao Berlin
Brussels mankany London Train tapakila
4. Manaova raharaha Smart raha mandidy ny sakafo ianao
Ny fitsangatsanganana vondrona dia fahombiazana amin'ny ankapobeny rehefa tsy misy fifandirana na fifamaliana eo amin'ny sakafo, indrindra. Eny! Ny ankamaroan'ny dia fitsangatsanganana dia miteraka fanamavoana rehefa mipoitra ny fanontaniana amin'ny safidin'ny sakafo isan'ny mpikambana tsirairay. Amin'ny toe-javatra toy izany, fisainana tsara sy fisakafoanana mahasalama no tokony ho teny filamatra ataonao. Ny fisarahana amin'ny fizahana trano fisakafoanana dia manome antoka ny olana sy ny fisavoritahana eo amin'ny mpivady. Ohatra, ao anaty vondrona folo, olona iray no mandoa ny volavolan-dalàna iray manontolo a tavoahangina divay, ary taty aoriana dia nandoa elanelana teo ny olona hafa tao amin'ilay vondrona, hitranga ny fisafotofotoana lehibe. Noho izany, minoa foana amin'ny fanaparitahana ny taratasim-bola. Raha tsy izany, azonao atao amin'ny alàlan'ny 'buddy-couple.' Atsofohy amin'ny anjaran'olona hafa ao amin'ilay vondrona ny anjaranao ary mandehana handoa ny volavolan-dalàna..
Tapakila fiaran-dalamby any Roma
Tapakila fiaran-dalamby any Florence mankany Roma
Tapakila Fiaran-dalamby ho an'ny Roma
5. Ataovy feno kajy miaraka amin'ny fandaniana
Te-ho tsara ara-teknika, ary mijoroa ho olona marani-tsaina eo amin'ny vondrona? Makà fanampiana avy amin'ireo fampiharana amin'ny Internet isan-karazany izay mifanaraka amin'ny zavatra ilainao rehetra, mifandraika amin'ny fandaniana. Mianiana amin'ny fangatahana toy Splitwise na Dosie Google, satria samy avelany hiditra ao daholo ny rehetra ao amin'ilay vondrona, mijery sy ovaina, araka ny fitakiany. Saingy tokony ho mailo amin'ny lafiny tsara sy ratsy momba ny tsirairay avy aminy.
Mamorona vondrona iray amin'ireo fampiharana ireo ianao, izay ahafahan'ny mpikambana ao amin'ny vondrona miditra haingana ary afaka mizara ny fandaniana rehetra amin'ny isan-jato. Ny fampandrenesana dia mandefa fampahatsiahivana ho an'ny olona isan-karazany momba ny fanadiovana ny volavolan-dalàna. Raha mikasa ny hiresaka momba ny fandaniana ny dia, aza atao ny manadino vola na manakarama vola am-bava. Aza adino io mba hiaina milamina dia mialoha.
Tapakila fiaran-dalamby ao Paris
Tapakila fiaran-dalamby any Paris ho any Paris
Tiket ny tapakila Fiaran-dalamby any Rotterdam mankany Paris
Brussels mankany tapakila fiaran-dalamby any Paris
6. Mipetraha daholo (Raha misy)
Vantany vao ankafizinao ny dia andian-tarika sy mandao an-trano sambatra any an-trano, fotoana izao hametrahana ny volanao taloha (raha misy)! Tsaratsara kokoa handaminana trosa taloha, mandritra ny fe-potoana nifanarahana. Raha tsy izany, izany dia toy ny kitapo! Betsaka ny te handoa vola fampiharana amin'ny Internet isan-karazany, satria toa malemy ilay izy. Ary ny olona salama saina sasany dia te handoa manokana, vola. Hamarino fa mandoa ao anatin'ny herinandro na mihoatra ianao. Raha tsy izany, tsy maintsy ho very amin'ny fanasana ianao amin'ny fivorian'ny vondrona manaraka.
Jereo ihany koa: https://www.saveatrain.com/blog/traveling-europe-budget/
Tapakila London mankany Amsterdam Train
Tiket ny tapakilan'ny Train Train to Berlin
Tsy misy izany, fa ny finoana diso ao amin'ny maro fa ny fitetezana izao tontolo izao dia tsy ho vita mihitsy raha tsy misy carte de crédit tsy misy fetra na vola mivoaka. Na raha misy manohana ny dia rehetra! Aleo anefa tsy mino izany ihany. Azo antoka fa tsy misy fitsangatsanganana atao raha tsy misy fandaniana. Ireo torolàlana voalaza etsy ambony dia azo antoka fa hitazona anao sy ilay andian-jiolahy miaraka aminao amin'ny fitsangatsanganana maro ho avy. Aza hadino ny fanapahan-kevitrao, ary miara-miasa amin'ny mpiara-dia aminao, dia tsy ho nofy fotsiny ny fitsangatsanganana tarika!
Mitsangatsangana ny kaontinanta amin'ny fiaran-dalamby sy boky Save A Train!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “6 Torohevitra savvy hanomanana drafitra iray amin'ny teti-bola” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary manome antsika voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fgroup-trip-on-budget%2F%3Flang%3Dmg Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Ao amin'ny rohy manaraka ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- ity rohy ity dia ho an'ny teny Anglisy làlana fiantsonana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, ary afaka manova ny de to fr na tr sy ny fiteny maro hafa nofidinao.
Izaho dia mpanoratra sady bilaogera mafana fo. Manampy ahy ny fahalalako ny fanoratana, fahaiza-manao & fahatakarana momba ny indostria manokana. Tiako ny manoratra sy mizara ny fahalalako indrindra amin'ny Travel Industry, Mino koa aho fa ny fitsangatsanganana dia lakilen'ny fiainana milamina sady manaparitaka ny zavatra inoako manerana an'izao tontolo izao. Ankoatra ny fanoratana, Tiako ny mitsangatsangana sy mamaky boky - Afaka tsindrio eto raha antsoy aho
Train Travel Austria, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby Switzerland, Travel Europe
Nandeha lamasinina, Train Travel Belzika, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Train Travel Holland, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Travel Europe